Lalao Basketball tsotra ho an'ny Android izay hampifandray anao | Androidsis
Ketchapp Basketball, lalao basikety ho an'ny Android hitifirana harona izay hampiraikitra aminao
Francisco Ruiz | | Lalao Android, Tutorials
Amin'ny lahatsoratra manaraka dia hatolotro sy atolotro a Lalao basikety ho an'ny Android, lalao iray amin'ireo tena tsotra antsoina hoe Lalao Kasual na Lalao Kasety izay tiako hiantsoana Lalao ho an'ny trano fandroana, izay iray amin'ireo mampiankin-doha indrindra azoko nilalao tamin'ny Android-ko ary izany dia nahavita nanantona ahy hatramin'ny voalohany.
Ny lalao mamaly ny anaran'ny Basketball Ketchapp, manaraka ny toeran'ny antsoina hoe lalao mahazatra miaraka amin'ny sary madio sy kilalao tsotsotra Amin'izay ny lehibe indrindra sy ny kely indrindra ao an-trano dia afaka milalao lalao amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny fitsofohana ny baolina ao anaty harona toy ny lalao baskety na fitifirana, na dia misy safidy vaovao vitsivitsy izay holazaiko etsy ambany aza.
1 Inona no atolotry ny Basketball Ketchapp antsika?
2 Sintomy ny Ketchapp Basketball maimaimpoana amin'ny Google Play Store
Inona no atolotry ny Basketball Ketchapp antsika?
Basketball Ketchapp mihoatra lavitra noho ny kilasika izany Lalao basikety ho an'ny Android izay tsy maintsy hanipazantsika ny baolina amin'ny harona tsy misy fanavakavahana mba hihoaran'ny marika manokana. Ary io dia, raha miavaka amin'ny lalao iray ity lalao Basketball ho an'ny Android ity, dia noho ny fahatsoran'ny sary ao amin'ny lalao, ny sary izay azo tsapain-tànana toy ny sary namboarina tamin'ny pensilihazo mampiseho tsipika vitsivitsy na kapoka tsotra fotsiny momba ny drafitra Sobika baskety. Raha izany dia ampiantsika koa ny fahatsorana goavana amin'ny rafitry ny lalao, rafitra lalao iray izay tsy mila solosaina fotsiny isika handefa ny baolina ary ampidirintsika koa ny fahafaha-misafidy amin'ny fomba lalao isan-karazany, dia rehefa tsapantsika ny fahasamihafana misy eo amin'ity lalao basikety ho an'ny Android ity sy ireo lalao hafa amin'ny fomba izay miparitaka ao amin'ny Google Play Store.
Ny maodely lalao samihafa izay azontsika isafidianana ny safidy fomba izay hitantsika eo amin'ny efijery an-trano ny fampiharana, izy ireo dia manao ity lalao ity ho an'ny terminal Android, hazavana misy izy ireo ary misy ho an'ny Android rehetra na inona na inona fototr'izy ireo, omeo azy ireo mikasika zavatra hafa izay miavaka amin'ny lalao hafa an'ny ny fomba. Fomba lalao sasany azo isafidianana amin'ireo:
Maody tsy misy farany na maody tsy misy farany izay hanampiantsika isa mandra-pahatongantsika ny fanandramana ny isa ny baolina ao anaty harona.
Mode amin'ny Time Challenger: Avy amin'ity maodin-dalao ity dia hanana 20 segondra isika hitifitra tsy an-kanavaka mankamin'ny harona ary hahazo isa avo indrindra azo atao. 20 segondra eo ho eo izay tsy manomboka manisa mandra-pahatongantsika ny fitifirana voalohany anay amin'ny harona.
Maody bouncing: Ity maody ity dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo maoderina lalao manintona indrindra amin'ny fampiharana izay ahafahana manome isa marobe ary miakatra amin'ny scoreboard antsika manokana izy ireo, tsy maintsy mitifitra mankamin'ny harona isika fa amin'ny fomba izay ahafahan'ny baolina mitsipaka eny am-pita. fitifirana harona mivantana.
Mode Multi Hoops: Ity fomba na fomba filalaovana baskety ity dia iray amin'ireo hadalana indrindra nataoko teo amin'ny fiainako, ary amin'ny alàlan'ny maody Multi Hoops dia haseho antsika ny zana-kazo fisaka basketball roa mihetsika hatrany, izay rehefa manipy ny The ball dia hanisa isa betsaka toy ny sobika voa isa tamin'ny andrana. Izany hoe rehefa manipy ny baolina isika dia hanampy ireo teboka mifandraika amin'ireo isa marobe rehefa manamboatra sobika amin'ny sobika maro araka izay andalovany, na dia fihemorana aza izany.
Ao amin'ny horonan-tsary nanombohanay ity lahatsoratra ity dia asehoko anao ny rafitry ny lalao sy ny fiasan'ity lalao basikety tsotra nefa mampiankin-doha ho an'ny Android, lalao baskety izay, raha vantany vao misintona sy manandrana azy amin'ny terminal Android-nao ianao dia tsy afaka hijanona milalao mandritra ny fotoana malalaka kely anananao.
Fomba filalaovana lalao
Lalao mety hilalaovana eo am-piandrasana ny lamasinina, bus, metro, eo am-piandrasana ao amin'ny biraon'ny dokotera na indrindra amin'ireo fotoan-tsiambaratelo izay mila fononan'ny olombelona rehetra.
Maody lalao Multi Hoops
Sintomy ny Ketchapp Basketball maimaimpoana amin'ny Google Play Store
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ketchapp Basketball, lalao basikety ho an'ny Android hitifirana harona izay hampiraikitra aminao
Android N Developer Preview 4 dia misy izao
Mamorona hitsin-dàlana haingana sy mora amin'ny App Shortcut Maker